ABADLALI BATHOLWE UKUTHI BANECORONA – Sivubela intuthuko Newspaper
ABADLALI BATHOLWE UKUTHI BANECORONA
Umdlali weBucs uBen Motshwari utholakale ukuthi unegciwane emva kokuhlola
ABADLALI ababili bakuleli batholwe ukuthi banegciwane iCovid-19 emva kokuhlola. Umdlali wasesiswini we-Orlando Pirates uBen Motshwari utholakale ukuthi unegciwane iCovid-19 emva kokukhombisa izimpawu.
“UMotshwari eke waba nezipawu zomkhuhlane ngaphambi kokuba ahlolwe njengoba sekubuya imiphumela iveza ukuthi unegciwane. Lo mdlali usazohlala yedwa izinsuku eziyishumi nane esaxilongwa ngaleligciwane,” kusho isitatimende esikhishwe yiBucs.
Khonamanjalo UMdlali osemncane oneminyaka engu-21 uSiphephelo Sithole ongumunye wabadlali abavele kwisikhungo sebhola iKZN Academy utholakale ukuthi uhaqwe yileli gciwane. USithole ogijima eqenjini iBelenenses yasePortugal udlale imidlalo engama-24 Kanti ubuye wabizelwa naseqenjini elikhulu yize engazange adlale.
Emdlalweni agcine ukubizwa kuwo ubungomhla ziyisishiyagalombili kuZibandlela ngenkathi leli qembu lidlala ngokulingana neFC Porto. Isikhungo sifisele ukululama okusheshayo kulomdlali.
“Sifisela uSithole ukululama okusheshayo njengoba etholakale ukuthi unalolubhubhane,” kusho isitatimende seKZN Academy.
BANIKELE NGEZIGIDI ZOKULWISANA NECOVID-19 OSOMABHIZINISI
ITheku lilokhu liqhubeke njalo nokubhebhetheka kwe-Covid-19